Man United oo Barcelona ku wargelisay go’aankeeda ku aaddan De Jong & Milinkovic-Savic oo ku soo laabtay diiradda Red Devils – Gool FM
Haaruun May 19, 2022
(Manchester) 19 May 2022. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ogeysiisay dhiggeeda Barcelona inaysan lacago badan ku bixin doonin saxiixa Frenkie de Jong.
Sida laga soo xigtay Wargeyska Daily Mail, Man United ayaa ku wargelisay Barca inaysan bixin doonin lacagta 70-ka milyan ee gini ah oo ay kooxda reer Spain ku doonayso inay ku iibiso De Jong xagaagan.
De Jong waa mid ka mid ah bartilmaameedyada koowaad ee Man United, iyadoo Macallinka imaan doona ee Erik ten Hag uu doonayo inuu dib ula midoobo laacibkii hore ee Ajax, laakiin heshiiska ayaa haatan ah mid dhex-dhexaad ah, waxayna Barcelona doonaysa inay dib u hesho lacagtii ay xiddigan ku soo iibsatay sanadkii 2019 oo ahayd 65 milyan oo gini.
Dhinaca kale kooxda ka ciyaarta horyaalka Premier League ayaa kormeerayaal u dirtay laacibka Lazio khadka dhexe uga ciyaara ee Sergej Milinkovic-Savic, sida uu baahiyey warsidaha CaughtOffside.
Xiddiga xulka qaranka Serbia ayaa muddo dheer la la xiriirinayey Red Devils, waxaana suuro-gal ah inay xagaagan dalab qaali ah miiska u saarto dhiggeeda reer Talyaani.
Kooxda Arsenal oo iibinaysa mid ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan... (Waa kee?)